Tenga Desogestrel powder (54024-22-5) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Desogestrel upfu (54024-22-5)
Rating: SKU: 54024-22-5. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatanidza uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweDousogestrel powder (54024-22-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Desogestrel powder yakawanikwa mu1972 uye yakaunzwa kushandiswa kwekurapa muEurope muna 1981. Yakave ichiwanikwa muUnited States muna 1992. Desogestrel dzimwe nguva inonzi "chizvarwa chechitatu" progestin. iyo inowanikwa zvakanyanya se progestogen-chete "mini piritsi" yekutonga kuberekwa.
Molecular Kurema: 310.47
Makemikari Mazita: Desogestel powder
Mazita eBrand: Cerazette, Mircette, Desogestrel powder, Cerazette powder, Mircette powdrr, 54024-22-5
Desogestrel powder (Cerazette) ipiritsi remuromo rekudzivirira, iro rinozivikanwawo sekuti 'mini piritsi'. Cerazette inopa kukurumidza kudzivirira kubva pakubata, kana ikatorwa pazuva rekutanga rako rekuenda kumwedzi. Izvo zvakasiyana neyakajairika yakasanganiswa piritsi rekudzivirira nekuti rine chinhu chimwe chete chinoshanda, progestogen yekugadzira.
Kufanana neyakawanda yakaderera dosi yemuromo yekudzivirira, Cerazette inzira inoshanda yekudzivirira uye yakaratidza kuve inopfuura 99% inoshanda mumakiriniki ekuedzwa . Izvo zvakare zvinoratidzwa kuti zvinobatsira mukuderedza kuitika kwekusagadzikana uye kunorwadza nguva. Kutora iyi yekudzivirira kubata pamuromo inokupa mukana wekuchinja, nekuti kusiyana nemamwe akawanda progestogen chete mishonga yekudzivirira, unogona kutora piritsi rako kusvika maawa gumi nemaviri mushure menguva yako yenguva dzose
Desogestrel powder (CAS 54024-22-5) inouya nemhando dzakawanda, apo inotorwa zvakanaka. Izvi zvinosanganisira:
-This mini yokuberekwa kwepiritsi inokupa iwe nekukurumidza kubata pamuviri kana iwe uchiitora pazuva rokutanga rako
-Sezvo ichingova ne progestogen, yakakodzera kushandisa kana iwe usingakwanise, kana kusarudza kusadaro, shandisa mushonga wekudzivirira nemuromo neestrogen.
-Kusavapo kweserogen mune iyi piritsi yekuberekwa kwepini kunobatsira kuchengetedza paunenge uchiyamwisa
-Varume vanoshandisa Degestrel (Cerazette) nokuda kwezvinangwa zvekudzivirira vanogonawo kuona kuti nguva yavo haina marwadzo kudarika nguva
-Degesogestrel (Cerazette) inogona kutorwa nevakadzi vari kuyamwa, uye neavo vanopfuura 35 nekusvuta, izvo zvinorehwa nevana vaviri vanorapa vana
-Kuongororwa kwemakiriniki 94% yevakadzi vanotambura nedysmenorrhea (nguva dzakaoma kwazvo) vakawana kuwedzera kukuru
Chii chinonzi Dhogestrel powder
ICHI CHINOKWENZWA CHINOKWANZIRWA KUTI MIBVUNZO YOKUDZIDZA KUNYANYE KUNYANYA KUTI IYE KUSASIKWA KUTI IYE KUTI KUTI UYE KUDZIDZA KUNA KUTI UYE ZVIMWE ZVINOKUDZIDZWA NEZVO
Dhaka rinonzi Desogestrel (Cerazette powder) chiremba chiremba anokurudzira ichave yakabva pane zvinotevera (shandisa chero chipi zvacho kana zvose zvinoshanda):
Desogestrel powder inowanikwa mune zvinotevera:
Chikamu chimwe nechimwe cheDousogestrel powder (Cerazette) ine mapiritsi e28 - mavhiki e4 anopa.
Tora tablet yako zuva rega rega panguva imwechete. Dzadza piritsi racho rose, nemvura.
Misoro yakadhindwa mberi kwechidimbu, pakati pehwendefa. Mazuva evhiki anodhindwa kumashure kwechidimbu. Zuva rega rega rinoenderana nehwendefa rimwechete.
Nguva dzose paunotanga mutsva weDoogestrel powder (Cerazette), tora tablet kubva mumutsara wepamusoro. Usatanga nechinyorwa chipi zvacho. Somuenzaniso kana iwe watanga musi weChitatu, unofanira kutora tablet iri kubva mumutsara wepamusoro wakarongwa (kumushure) neWED.
Ramba uchitora bheti rimwe nerimwe zuva rimwe nerimwe kusvikira pakatoti isina chinhu, nguva dzose uchichitevera hutungamiri hunoratidzwa nemiseve. Nokutarisa kumashure kwepakiti yako unogona kutarisa nyore nyore kana watotora tablet yako pane rimwe zuva.
Iwe unogona kuva neropa rekubuda ropa panguva yekushandiswa kweDousogestrel powder (Cerazette), (Ona Chikamu 4 Side Effects) asi unofanira kuramba uchitora mahwendefa ako seasingaoneki.
Kana tambo isisina chinhu, unofanira kutanga nejira nyowani reDoogestrel powder (Cerazette) pazuva rinotevera - pasina kukanganisa uye pasina kumirira kubuda kweropa.
Nzira yeDoogestrel inoshanda sei
Anosungira progesterone uye estrogen receptors. Target masero anosanganisira chikadzi chekuberekwa, chirwere chemamota, hypothalamus, uye pituitary. Imwe yakasungirirwa kumusana, progestin yakafanana neDousogestrel powder inotadzisa nguva yakawanda yekusunungurwa kwegonadotropin inokonzera hormone (GnRH) kubva ku hypothalamus uye inofanirwa kupera kwema-pre-ovulatory LH (luteinizing hormone).
Desogestrel powder inoshanda sechirongwa chekudzivirira pamuviri kunyanya nekudzivirira kusunungurwa kweii kubva muhovary (kuvhuvhuta). Inobatawo nekuwedzera kuwanda kwechigunha chepanyama pamutsipa wechizvaro, zvichiita kuti zvive zvakaoma kuti umumvu uwane kubva mumukadzi kusvika mudumbu. Nokudzivirira chirwere chinopinda muchibereko, kubudirira kugadziriswa kweiyo mazai akasunungurwa haashoma.
Desogestrel powder (Mircette powdrr) inoshandawo kushandura mhando yemukati wechibereko (endometrium). Izvi zvinodzivirira kudyara kunobudirira kwemazai ese akasangana pamadziro echibereko, nekudaro kudzivirira nhumbu.
Udza chiremba wako kana uri pamuviri kana kuronga kuti uve nepamuviri.
Iyo FDA inoronga mishonga inoenderana nekuchengetedzwa kwekushandisa panguva yekuzvitakura. Zvikamu zvishanu - A, B, C, D, uye X, zvinoshandiswa kutarisisa njodzi dzinogona kuitika kumwana asati aberekwa kana mushonga uchitorwa panguva yepamuviri.
Desogestrel powder inowira muchikamu X:
Yakaratidzirwa kuti vakadzi vanotora Desogestrel powder panguva yekuzvitakura vangave nevana vane matambudziko. Pane mamiriro ezvinhu apo kubatsirwa kwemishonga kune amai kunowedzera zvinetso zvekukuvadza mwana. Iyi mishonga haifaniri kushandiswa nevakadzi vane pamuviri.
Chirwere cheDoogestrel Chiine Matambudziko Api
Desogestrel powder (Cerazette) inorayira mushonga wokurapa, izvo zvinoreva kuti kune ngozi shoma yekuva nemigumisiro yechirwere. Muchiedza chemakiriniki, Cerazette yakanyatsotsungirirwa nevatori vechikamu, uye zvimwe zvikanganiso zviduku zvakadai se:
Maitiro anochinja, kuderera kwepabonde (libido), kuora musoro, kushungurudza, kusuruvara, kurwadziwa kwepamu, kusagadzikana nguva uye kuwedzera kwekuwedzera
Zvidzidzo zvinoratidza kuti izvi zvinowanikwa mune vakadzi vashoma pane mumwe chete pavakadzi gumi. Iyi migumisiro yemigumisiro inofanira kuderera apo muviri unowanzojaira piritsi yemaminisi, asi kana zvikaitika kuti zviitike uye zvichiri kuramba, unofanira kufanira chiremba kuti ukurukure mamiriro ako.
Nzira yekutenga Desogestrel powder kubva kuAASraw